आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१० मंसिर २०७८ शुक्रबार, २६ नोभेम्बर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार ००:२५
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ हेमन्त ऋतु वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष १० गते शुक्रबार तद्अनुसार सन् २०२१ नोभेम्बर २६ तारिख मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष सप्तमी तिथि अश्लेषा नक्षत्र ऐन्द्र योग भद्रा करण आनन्दादिमा मृत्यु योग चन्द्रमा कर्कट राशिमा १७ः०० बजेसम्म त्यसपछि सिंह राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः३४ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः७ मा हुनेछ ।
मेष – सुखद समाचार सुन्नुहोला । ठिक समयमा सही निर्याय लिन सक्नुहुनेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । ग्रहगोचरको प्रभावस्वरुप हासविलासमा आकर्षण बढ्ला । भागदौड भने बढ्नेछ । खेलकूद र भ्रमणमा रुचि बढ्नेछ । शैक्षिक र रचनात्मक काममा आंशिक प्रगति मिल्नेछ । धनको आवागमन भइरहने छ । अरुको भर पर्नु उचित नहोला ।
वृष – व्यवसायमा सामान्य फाइदा होला । प्रतिष्पर्धीहरू पराजित होलान् । सुख आनन्द बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । आयस्रोत बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आफन्तसुख बढ्नेछ । सुखसुविधाको वस्तु बढ्नेछ । ब्ययर्थको झन्झटबाट छुटकारा मिल्ला । यात्रा हुने, महत्वपूर्ण काम बन्ने सम्भावना रहनेछ । आर्थिक पक्षमा सुधार हुनेछ । विशेषगरी पारिवारिक क्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु उचित रहनेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न भैहाल्नेछ ।
मिथुन – रोग र शत्रुबाट छुटकारा मिल्ला । होसियारी अपनाउनुपर्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आँट उत्साह बढ्नेछ । भाग्योदय हुनेछ । साहसिक कार्यमा रुचि बढ्ला । उच्चाधिकारीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सुख समृद्धि बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । कुनै प्रकारको जोखिममा नपरी काम गर्नु उचित हुनेछ । रोकिएको काम बन्ला । ख्याति फैलिनेछ ।
कर्कट – प्रतिष्पर्धीहरुले काम बिगारिदिन सक्छन्, तर जित तपाईंकै होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत सुख समृद्धि बढ्नेछ । आर्थिक प्रगतिसँगै यश गौरवमा पनि बढोत्तरी हुनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम,यात्रापरक काम आदि क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । गीतसंगीत रसराग प्रेममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । भोगविलासमा रुचि रहनेछ ।
सिंह – कार्यसफलताले उत्साह बढाउनेछ । पार्टनरसीपमा लाभ मिल्ला । कठोर मिहीनेतले सफलता मिल्नेछ । मान सम्मान मिल्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा केन्द्रित रहनु हीतकर होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य वृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । भोग विलासको अवसर भेट्ला । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुने छैन ।
कन्या – रमाइलो यात्राको योग छ । दाम्पत्य जीवनमा सावधानी अपनाउनुहोला । आयस्रोत बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । साहसिक काममा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । खेलकूदमा रुचि बढ्ला । कलात्मक र रचनात्मक क्षमता बढ्नेछ । विवेक लगाएर योजनानुसार काम गर्नु उचित हुनेछ ।सन्तानसुख बढ्नेछ । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । कर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । सुख शयल विलासमा आकर्षण बढ्ला ।
तुला – विश्वासमा पारेर झुक्याउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला । कामको तारिफ हुनेछ । कार्ममा सफलता मिल्नेछ । आफन्त सुख बढ्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । उन्नतिपदोन्नति हुनेछ । लापर्वाही नगरी योजना बनाएर काम गर्नु बेस रहला । उन्नति हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ । ख्याति फैलिनेछ । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ ।
वृश्चिक – परिजनको सहयोगले लाभ उठाउन सक्नेछ । केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्ला । शुभता बढ्ला । मनोकूलको काम बन्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको धन उठ्नेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ । नयाँ दायित्वको पनि प्राप्ति हुनेछ । यात्रापरक कार्य बन्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । विकासको सम्भावना देखा पर्नुसँगै आशा उत्साह पनि वृद्धि हुनेछ । ऐश्वर्य बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्नेछ । अरुको भरमा नबसी विवाद आदिप्रति सचेत भइ योजनानुसार काम गर्नु बेस होला ।
धनु – सुख–दुःखमा साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । आय आर्जन होला । लगानी र खर्च बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमण हांसविलास आदिमा आकर्षण बढ्नेछ । लापर्वाही नगरी योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु हीतकर होला । स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नुपर्नेछ । ऐनकानूनलाई सम्मान गर्नु हितकर होला ।
मकर – दिन शुभ फलदायक रहनेछ । प्रेमको बन्धन कसिनेछ । आयस्रोत वृद्धि हुनेछ । कुनै प्रकारको शारीरिक र आर्थिक समस्याको समाधान मिल्नेछ । उत्थानमूलक काममा ऊर्जा लगाउनु उचित हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । भोगविलासको अवसर प्राप्त होला । सुख आनन्द धन मान बढ्ला । दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ । आर्थिक कार्य बन्नेछ ।
कुम्भ – अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्ला । दीगो लाभ हुने कुरामा लगानी गर्नुहोला । लाभदायक समय छ । सुख आनन्द बढ्नेछ । यात्रा परक काम बन्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकुल रहनेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । मान महत्व बढ्नेछ । सार्बजनिक कार्य आदिमा आकर्षण बढ्नेछ । योजना र बजेट बनाई काम गर्नु उचित हुनेछ । साहसिक कार्यमा प्रवृत्ति बढ्ला । शुभ समाचार मिल्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ ।
मीन – हिम्मतले काम बनाउन सकिने छ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । विशेषगरी शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्ला । शुभ काम बन्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख शान्ति वृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । विजयश्री मिल्नेछ । हरेक प्रकारले सुख सौग्यमा वृद्धि हुनेछ । मान महत्वमा बढोतरी हुनेछ । लगानी उठला । अन्नधन बढ्नेछ । यात्रा होला । ख्याति फैलिनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । सन्तानसुख बढ्ला ।